Iyo Tariro Diamond yakakosha uye nhoroondo - kutuka & mutengo 2021
Iyo Tariro Dhayamondi
Iyo Tariro Dhayamondi ndeye 45.52 carat bhuruu yedhaimani. Dhayamondi yebhuruu hombe yakamboonekwa kusvika parinhasi. tarisiro izita remhuri yaive muridzi kubva muna 1824. Iro daimondi rinotorwa kubva ku "Bleu de France“. Korona yakabiwa muna 1792. Yakacherwa muIndia.
Iyo Hope Diamond ine mukurumbira wekuve dhayamondi yakatukwa, sezvo vamwe varidzi vayo vanoteedzana vaiziva mugumo unonetsekana, uye unotyisa. Nhasi zviri pakati pezviratidzwa muNational Museum ye Natural History muWashington, DC, United States.
Tariro Mutengo wedhaimondi munhoroondo | Ndinovimba Diamond kutuka | Ndinovimba Diamond inokosha
Iyo inorondedzerwa seRudzi IIb diamond.
Dhaimondi rakafananidzwa nehukuru uye chimiro nezai renjiva, walnuts, inova "peya rakaumbwa." Izvo zviyero maererano nehurefu, upamhi, uye kudzika zviri 25.60 mm × 21.78 mm × 12.00 mm (1 mu × 7/8 mu × 15/32 mu).
Iyo yakatsanangurwa seinoshamisira yakasviba greyish-bhuruu "pamwe nekuve" yakasviba bhuruu muvara "kana iine" steely-bhuruu "ruvara.
Iro dombo rinoratidza rakanyanya kusimba uye rakatsvuka mhando yemwenje: mushure mekuratidzwa kune pfupi-wave ultraviolet mwenje, dhayamondi inogadzira inopenya tsvuku phosphorescence inoenderera kwenguva yakati mushure mekuvhenekerwa kwechiedza, uye hunhu uhu hunoshamisa hungangodaro hwakabatsira kurudzira mukurumbira waro wekutukwa.
Kujeka kuri VS1.
Iyo yakatemwa ndeyekusheni antique inopenya ine yakashongedzwa bhanhire uye akawedzera maficha pane iyo pavilion.
Dhaimani rakadzoserwa kuFrance nemufambi Jean-Baptiste Tavernier, uyo akaitengesa kuna King Louis XIV. Ngano yedhaimondi, inogara ichitangwazve, ine kuti ibwe rakabiwa kubva muchiumbwa chemwarikadzi Sitâ. Asi imwe nyaya yakasiyana zvachose inogona kuteverwa muna 2007 naFrançois Farges weMuséum national d'histoire naturelle muParis:
ngoda yakatengwa naTavernier, mumusika mukuru wedhaimani kuGolconde, paakaenda kuIndia pasi peMughal Empire. Vatsvagiri veNatural History Museum vakawanawo nzvimbo yemugodhi iyo inotendwa kuti ngoda yakatangira uye iri kuchamhembe kwezuva ranhasi reAndhra Pradesh. Yechipiri fungidziro pane kwakatangira dhayamondi inotoratidzwa neMughal zvinyorwa zveHyderabad.
Makuhwa akati wandei anoda kuti dhamondi yeTariro itukwe uye iuraye avo vanopinda mairi: Tavernier angadai akapedzisira adyiwa nezvikara, mushure mekuparadzwa, apo muchokwadi akangofa nekuchembera kuMoscow, pazera makumi masere nemana. Louis XIV akachekwa dombo, raibva kubva pa 84 kusvika pa112.5 carats, ndokudaidza ngoda kuti yakawana "Violet de France" (muChirungu: French Blue, nekudaro kushanduka kwezita razvino).
MunaGunyana 1792, iyo dhaimondi rakabiwa kubva kune yenyika fenicha yekuchengetera panguva yekuba kweCrown zvishongo zveFrance. Dhaimani nembavha dzayo dzinobva muFrance dzichienda kuEngland. Dombo rakadzokororwa ipapo kuti ritengeswe zviri nyore uye mutsetse waro wakarasika kusvika muna 1812, makore makumi maviri nemazuva maviri mushure mekuba, nguva yakaringana yekuti inyorwe.
Munenge muna 1824, dombo, iro rakanga ratotemwa nemutengesi uye mugamuchiri Daniel Eliason, rakatengeswa kuna Thomas Hope, mubhengi muLondon, nhengo yemutsetse wakapfuma uyo aive neTank & Co bhangi, uye akafa muna 1831.
La ibwe ndiyo nyaya yeinishuwarenzi yehupenyu yakanyorwa nemunin'ina wake, iyeye gem muunganidzi, Henry Philip Hope, uye anotakurwa nemukadzi waThomas, Louisa de la Poer Beresford. Kugara mumaoko eTariro, iyo dhayamondi ikozvino inotora zita ravo uye inoonekwa mune yehuwandu hwaHenry Philip mushure mekufa kwake (asina vana) muna 1839
Mwanakomana wedangwe waThomas Hope, Henry Thomas Hope (1807-1862), akaiwana nhaka: dombo rakaratidzirwa muLondon muna 1851 panguva yeGreat Exhibition, ikazova kuParis, panguva yekuratidzwa kwa1855. Muna 1861, mwanasikana wake wekurera Henrietta, mugari wenhaka chete , anoroora mumwe Henry Pelham-Clinton (1834-1879) atova baba vemukomana:
Asi Henrietta anotya kuti muzukuru wake achaparadza hupfumi hwemhuri, saka anoumba "mutirastii" uye anotumira pierre kumuzukuru wake, Henry Francis Hope Pelham-Clinton (1866-1941). Akazvitora muna 1887 muchimiro cheinishuwarenzi yehupenyu.
Saka anogona kuzviparadzanisa nebwe chete nemvumo yedare uye bhodhi rematirastii. Henry Francis anorarama kupfuura zvaaikwanisa uye zvimwe zvinokonzeresa kubhuroka kwemhuri yake muna 1897. Mudzimai wake, mutambi May May (in), anovapa zvavanoda vega.
Panguva iyo dare parakamubvisa kuti atengese dombo kuti abatsire kubhadhara zvikwereti zvake, muna 1901, May akaenda nemumwe murume kuUnited States. Henry Francis Hope Pelham-Clinton anotengesa dombo muna 1902 kuenda kuLondon jeweler Adolphe Weil, uyo anoitengesazve kuAmerican broker Simon Frankel ne $ 250,000.
Varidzi vanoteedzana veTariro muzana ramakore rechimakumi maviri ndiPierre Cartier, mwanakomana wemutengesi anozivikanwa Alfred Cartier (kubva 1910 kusvika 1911) anoitengesa madhora zviuru mazana matatu kuna Evalyn Walsh McLean. Yaive yake kubva muna 300,000 kusvika parufu rwake muna 1911, ndokuzopfuudza kuna Harry Winston muna 1947, uyo akazvipa kuna Smithsonian Institute muWashington muna 1958.
Kuti utakure ibwe rive rakangwara uye rakachengeteka sezvinobvira, Winston anoritumira kuSmithsonian neposvo, muchikamu chidiki chakaputirwa nekraft pepa.
Kusara kweakakura dhayamondi yebhuruu yakamboonekwa kusvika parinhasi, iyo dhayamondi ichiri kuoneka munzvimbo inozivikanwa, uko kwainobatsira kubva mune yakachengetwa kamuri: ndiyo yechipiri inoyemurwa hunyanzvi chinhu munyika (mamirioni matanhatu evashanyi vegore) mushure meMona Lisa ku iyo Louvre (mamirioni masere evashanyi pagore).
Ko Tariro Diamond yakatukwa here?
The dhayamondi yakaramba iine mhuri yehumambo yeFrance kusvika yabiwa muna 1792 panguva yeChimurenga cheFrance. Louis XIV naMarie Antoinette, avo vakagurwa misoro, vanowanzo taurwa sevanyajambwa ve kutuka. The Ndinovimba nedhaimani ndiyo inonyanya kuzivikanwa akatuka diamond munyika, asi ingori chete yeakawanda.
Ndiani parizvino muridzi weTariro Diamond?
The Smithsonian Institution uye Vanhu veUnited States. Iyo Smithsonian Institution, inozivikanwawo saSmithsonian, iboka remamuseum uye nzvimbo dzekutsvagisa dzinotarisirwa nehurumende yeUnited States.
Yaive Tariro Dhayamondi paTitanic?
Mwoyo weGungwa muTitanic firimu hachisi chidimbu chaicho chishongo, asi chakakurumbira zvakadaro. Izvo zvishongo zvakadaro zvakavakirwa padhaimondi chairo, iyo 45.52 carat Tariro Dhaimondi.
Iko Tariro Dhayamondi isafire?
Iyo Diamond yedhaimani haisi yesafiri asi hombe dhayamondi yebhuruu.
Iko Tariro Diamond inoratidzirwa ndeyechokwadi here?
Ehe iri. Iyo chaiyo Tariro Dhaymondi chikamu chemuunganidzwa wekusingaperi wemu museum uye inogona kuonekwa kuNational Museum of Natural History muWashington, DC, United States. MuHarry Winston Gallery, yakatumidzwa kunzi jeweler yeNew York iyo yakapa dhaimondi kumuseum.
Chii chinonzi tariro yedhaimani nhasi?
Iyo Blue Hope Diamond ibwe rinoyevedza rebhuruu rine nhoroondo inonakidza. Mazuva ano, dhayamondi iri rinorema makirati makumi mashanu nemashanu nemakumi mashanu nemaviri uye rinokosha madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora.
zuva muridzi ukoshi
Tariro mutengo wedhaimani muna 1653 Jean-Baptiste Tavernier 450000 zvinyorwa
Tariro mutengo wedhaimani muna 1901 Adolph Weil, mutengesi weLondon jewel $ 148,000
Tariro mutengo wedhaimani muna 1911 Edward Beale McLean naEvalyn Walsh McLean $ 180,000
Tariro mutengo wedhaimani muna 1958 Smithsonian Museum $ 200- $ 250 miriyoni
Pane chero munhu akaedza kuba iyo Hope Diamond?
Musi waSeptember 11, 1792, iyo Hope Diamond yakabiwa kubva mumba yaichengeta korona zvishongo. Dhaimani nembavha dzayo dzinobva muFrance dzichienda kuEngland. Dombo rakadzokororwa ipapo kuti ritengeswe zviri nyore uye mutsetse waro wakarasika kusvika muna 1812
Pane pane mapatya here kuTariro Diamond?
Iko mukana wekuti Brunswick Bhuruu uye Pirie madhaimani angave ari mabwe ehanzvadzi kuna Tariro kwave kuri kufunga kwerudo asi hachisi chokwadi.
Nei iyo mangoda yetariro ichidhura?
Ruvara rwebhuruu rakasarudzika reTariro dhayamondi ndicho chikonzero chikuru nei vanhu vazhinji vachiitenda kuti haina mutengo. Chokwadi madhaimani asina ruvara, kutaura zvazviri, haana kujairika uye anozorora kune rimwe-kumagumo erudzi rwevara. Kune imwe-yekupedzisira iyo yero madhaimani.
Ndiyo Tariro Dhayamondi idhayamondi hombe munyika?
Ndiyo dhayamondi yebhuruu hombe pasi rose. Asi iyo Golden Jubilee Diamond, iyo 545.67 carat shaimondi dhayamondi, ndiro rakacheka-cheka uye rakapetwa mangoda pasi rose.
Natural mangoda ari kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira zvishongo zvetsika ne champagne diamond senge mhete, mhete dze Stud, bracelet, chishongo kana chishongo. Champagne diamond inowanzoiswa pamaruva egoridhe semhete dzekubatanidzwa kana mhete yemuchato… Ndapota taura nesu for quote.
Dhaimani 0.15 ct
Dhaimani 0.38 ct
18K Rose Goridhe Diamond Ring
Dhaimani 0.18 ct
Dhaimani 0.43 ct
14K Rose Goridhe Diamond Ring
Dhaimani 0.20 ct
kupinda Izvi re muna nhau uye tagged dhayamondi, tarisiro, Ndinovimba Diamond.
Kutenda kuna Mai Angelina Jolie
Emerald yakakura pasi rese